स्वास्थ्य – Charchit Entertainment
अरुलाई होइन, आफैलाई बदलौं
अहिले कोरोना महाव्याधिले सर्वत्र सन्त्रास फैलाएको छ । यतिबेला यो संक्रमणबाट बच्ने सर्वोत्तम विकल्प भनेको भौतिक दूरी र मास्कको प्रयोग नै हो । यो ज्ञान अधिकांशलाई छ । तर, हामीमध्ये धेरैजसो अनुशासित ढंगले यी कुराहरु पालना गरिरहेका छैनौं । हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने यो सबै काम अरुले गर्ने हो । फलानोले मास्क लगाएन, फलानोले […]
महिलाहरुले कण्डम कसरी प्रयोग गर्छन ? खुल्यो यस्तो रोचक तथ्य
March 4, 2021 March 5, 2021 Auther
काठमाडौं । सामान्य रुपमा हेर्दा स्त्री क’ण्डमलाई सुखभोग गर्नुभन्दा केहि समय अगाडि लगाउनु पर्दछ । तर तल्काल प्रयोग गरेर सुखभोग गर्न मिल्दैन । क’ण्डममा भएका दुई वटा रि’ङ्गहरुमध्ये खु’म्चिने पट्टिको रिङ्गलाई यो’नी भित्र घु’साउनु पर्दछ ।अर्को कुरा मिति र प्याकेटमा हावा भए नभएको राम्ररी हेर्नु पर्दछ । म्याद गु’ज्रिएको भए प्रयोग गर्नु हुँदैन यसले विभिन्न […]
भनेकै समयमा गर्भ बस्नको लागि यो समयमा यौन सम्पर्क गर्नुपर्छ : डा. सबिना सिम्खडा
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय बाँझोपन एक जटिल समस्याको रुपमा देखिएको छ । यसमा महिला र पुरुष दुबैको गल्ती हुने जानकारहरु बताउँछन । लामो समय देखि डा. सबिना सिम्खडा यस क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी छिन् । उनले बात्सल्या आईभिएफ फर्टिलिटी सेन्टर खोलेको करिब तीन बर्ष भयो ।उनले यो तीन बर्षमा हजारौं निःसन्तानको पीडा खेपेका महिलाहरुलाई […]